I-Samsung Renove: inkqubo yesaphulelo kwi-Galaxy S9 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | MWC, Izaziso, Samsung
Izolo ibiyimini ebaluleke kakhulu kwi-Samsung. Ukusukela ukuba amazwe aseKorea azise i-Galaxy S9 kunye ne-S9 +, iiflegi zayo ezimbini ezintsha. Izixhobo ezibini eziza kunika okuninzi ukuba uthethe ngazo kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Kodwa, ayisiyiyo kuphela kwento inkampani eyabhengeza ngayo ngolu suku lokuqala lwe-MWC 2018. Kuba i-brand ibhengeze kwakhona i-Samsung Renove.
Yintoni i-Samsung Renove? Igama lakhe sele lisinika umkhondo omncinci. Yinkqubo yesaphulelo kubasebenzisi abafuna ukuthenga iGPS S9. Unokufumana izaphulelo xa uthenga ifowuni ukuba unikezela ngeselula yakho.
Isicwangciso ngoku siyafumaneka kwiivenkile zamaqabane nakwivenkile esemthethweni yohlobo. Ke abo banomdla wokuthatha inxaxheba okanye ukusebenzisa le Samsung Renove banokwenza njalo. Sisebenza njani esi sicwangciso sophawu? Okokuqala, into ekufuneka yenziwe ngumsebenzisi yile thenga i-Galaxy S9 okanye i-S9 +. Linyathelo lokuqala layo yonke into.
Nje ukuba ifowuni ithengwe, ukuhlaziywa kuya kuqhutywa. Ukulandela, abasebenzisi kufuneka baye kwiwebhusayithi yeBrightstar, kule unxibelelwano. Apho kuya kufuneka ulandele amanyathelo abonisiweyo, achazwe kakuhle. Into ekufuneka uyenzile ngenisa isixhobo se-IMEI kwaye ke siya kwazi ukuba sixabise kangakanani isixhobo.
Kuxhomekeke kwimodeli esiza kuyizisa, amaxabiso ahlukile. La ngamanye amaxabiso athe apapashwa kwiwebhusayithi yeSamsung Renove:
I-Samsung Galaxy S8 +: i-376 i-euro
I-Samsung Galaxy S8: I-euro ezingama-336
I-Galaxy S7 Edge: i-euro ezingama-231
Nangona uphawu ngokwalo luxela oko Olu vavanyo lwenziwa ngesiseko sokuba ifowuni ikwimeko entle. Ke ukuba i-terminal yakho ayikho kwimeko efanelekileyo, awuyi kuyifumana loo mali. Ngapha koko, oku Isamsung Samsung yintshukumo yokwazisa eya kuhlala kude kube ngoMatshi 25. Ke ukuba ucinga ukuthenga i-Galaxy S9 kwaye unayo ifowuni ye-Samsung, ungathandabuzi ukusebenzisa le nkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Renove: inkqubo yesaphulelo kwi-Galaxy S9